Ho entina aiza ity firenena ity? – Malag@sy Miray
Nandalo ny 24 jolay 2013 ny malagasy. Tsy nisy ny fifidianana filoham-pirenena. Efa tsinjo lavitra izy io rehefa tsy nametra-pialàna ny Filohan’ny tetezamita 60 andro mialohan’io fotoana tokony handatsaham-bato io. Nisy ihany ireo kandidà no nametra-pialàna araka ny vaovao re fa toa tsy fantatra hoe nekena ve sa tsia izany fametraham-pialàna izany.
Teo anelanelan’izay dia tadidy hoe nisy ireo saika hametraka ny antontan-taratasy no tsy noraisina satria tsy feno ireo taratasy nilaina ka tsy afaka nametraka izany taorian’ny alahady, fe-potoana farany ahafahana mametraka izany. Kinanjo fantatra avy eo fa nisy antontan-taratasy voapetraka ihany taorian’izany fe-potoana izany. Dia mbola eto isika amin’izao.
FA HO ENTINA AIZA MARINA ITY FIRENENA ITY E? Ary iza marina no tena mitantana sy manosika azy ao ambadika ao raha toa ka tsy ireo mpitondra eo ambony seza amin’izao no tena manao izany 100%? Maninona ny ankamaoan’ny olona no tafateny izany? satria ve marina izany? hoe misy firenena na vondrom-pirenena te hampikatso ny fiainam-pirenena mba ahafahana mahazo mora izay tombon-tsoa manokana irina?
Tamin’ny fotoan’andron’ny « Ento miakatra ity firenena ity » dia be fanantenàna ireo vahoaka maro an’isa. Nanantena fa hiposaka indray ny masoandro vaovaon’i Madagasikara rehefa nandalo ny Madagasikara tsy mandoalika (fa nidaraboka). Nandalovana ny 10 août, fahatsiarovana izay nitranga tamin’ny taona 1991, tsy nasiana resaka, tsy nasiana fahatsiarovana, fa dia efa nosoloina ny 7 février hono e! Dia izay izany… Ny vahoaka atao izay maha-noana azy ka tsy hieritreritra afa-tsy izay harapany, ny misy atao zarany aza misy gaboraraka ahafahana manararaotra ny fahalemen’ny sasany.
Ankehitriny dia na inona na inona mitranga dia ny mpitaza-maso no betsaka, tsy misy sahy miteny fa ndrao voasambotra toa an’i Laza Razafiarison ilay kandidà nitaky ny hisian’ny fifidianana (na ho lany izy na tsy ho lany!) Aleon’ny olona mba ho toy ny volamena, satria izay mangina, hono, volamena. Dia miara-milentika amin’ny sambo any fa any indray angamba manantena ankisitrika hiverenana hiakatra ety amin’ny rivotra azo iainana.